Date: 01 février 2018 - 15:28
Inona daholo kay no lalana tokony arahina raha hanangana zaza? Iaho dia lehilahy niteraka zaza lahy efa valo taona, tsy nozanahako izy tamin'ny teraka, ary nisaraka izaho sy ny reniny. Amin'izao fotoana izao anefa dia nilàza tamiko ny reniny fa tsy vitany itsony hono ilay zaza dia atsangano. Misaotra anareo sahady amin'ny torohevitra.
Re: Zaza sary
Date: 01 février 2018 - 16:27
dia eto @ forum ve ianao no manontany an'izany de hanatena ahita valiny fiable ve ?
tonga dia manatona eny @ tribonaly anosy e
Date: 01 février 2018 - 21:16
Mankany @ mairie ianao, toa mila copie-nao, photocopie CIN, certificat de résidence izy izay raha tsy diso aho. Mila ny consentement n´ny reniny (tsy haiko na taratasy fotsiny dia mety na mila ny présence n´ny reniny mihintsy).
Fanjanahana no izy fa tsy fananganana.
Date: 10 février 2018 - 18:05
Ka veleso ny vy dieny mafana , araraoty ny fanaovana taratasy , manontania eny amin'ny firaisana na tribonaly . Momba ny taratasy ilaina rehetra . Hafaingano .
Date: 15 février 2018 - 08:07
Any amin'ny firaisana dia vita, mitondra karapanondro na manontany eny, raha tsy vita any dia any amin'ny tribonaly, dieny izao mety izao ny reniny dia ataovy haingana, tokony zaranao aza izy mety. Mirary soa !
Date: 19 février 2018 - 12:25
Misaotra anareo rehetra namaly.